CABDI XAASHI oo codsi xasaasi ah u diray Qoor Qoor - Caasimada Online
Home Warar CABDI XAASHI oo codsi xasaasi ah u diray Qoor Qoor
CABDI XAASHI oo codsi xasaasi ah u diray Qoor Qoor
Muqdisho (Caasimada Online) – Guddoomiyaha Aqalka Sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullahi ayaa warqad uu udiray madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoor Qoor ku dalbaday in lagu casuumo shirka lagu wado inuu berri ka furmayo magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug.
“Salaan qiimo badan ka dib, anigoo ka ambagaadaya kulankii uu ku baalay Madaxwaynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed “Farmaajo” ee ahaa in la isugu yimaado shit wadatashi ah magaalada Dhuusa-mareeb ee Caasimadda Dowlad Goboleedka Galmudug, si looga wada hadlo, xalna looga pato khilaafaadka ka taagan hirgelinta heshiiskii 17 Sabteembar,” ayaa lagu yiri qoraalka Cabdi Xaashi.
“Maadaama arrinta doorashada Xildhabaannada ka soo jeeda Gobollada Waqooyi Soomaaliland ay ka mid tahay arrimaha khilaafaadku ka taagan yahay ee laga wada hadlayo, waxaan kula socodsiinayaa in ay noo gorshaysan tahay aniga iyo wafdi aan hogaaminaayo in aanu nimaadno magaalada Dhuusamareeb maalinta berri ah ee ay taariikhdu tahay 02 Febraayo 2021; si aanu shirka uga qayb galno,” ayaa lagu yiri warkan.
“Mudane Madaxwayne, waxaan kugu bogaadinayaa adiga, xukuumadda iyo shacabka Galmudug sida hagar la’aanta ah ee Soomaalinimada leh ee aad u math gelisaan shirarka wada tashiga ee lagaga xaajoonayo arrimaha masiiriga ah ee dalka,” ayuu yiri guddoomiye Cabdi Xaashi.